AKHRISO:- Alshabaab oo Awaamiir culus kusoo rogay ergadii soo dooratay xildhibaanada Somalia. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ November 26, 2021 ] DAAWO VIDEO:Ciidanka PSF ee Puntland oo Dignin Culus u Diray Deni Jawaabna ka Bixiyey talaabooyinku Qaaday	Maqal Iyo Muuqaal
[ November 11, 2021 ] XOGTA Waraysi Pro.Abdiwali Halistii Meles Zenawi Geeska Afrika uu Ku Beeray oo Abey Soo Afjaray	Maqal Iyo Muuqaal
[ November 9, 2021 ] XOGTA Erdogan oo ku Sameeyey Biden Bahdilaad Waligeed Madaxweyne Maraykan Ana Lagu Samayn	Maqal Iyo Muuqaal
[ November 9, 2021 ] Maxaa Sababay Mucaraadkii oo Burburay Weerarna Isku Qaaday Dhexdooda	Wararka Maanta
[ November 9, 2021 ] Video: Soomaaliya ‘oo gashay xaalad la mid ah tii lagu dilay’ madaxweyne Cabdirashiid	Maqal Iyo Muuqaal
HomeWararka MaantaAKHRISO:- Alshabaab oo Awaamiir culus kusoo rogay ergadii soo dooratay xildhibaanada Somalia.
AKHRISO:- Alshabaab oo Awaamiir culus kusoo rogay ergadii soo dooratay xildhibaanada Somalia.
July 15, 2019 marqaan Wararka Maanta 0
Bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee malayshiyaadka Al-shabaab ayaa digniin kama dambays ah loogu diray odoyaashii ergooyinka ahaa ee soo xulay Baarlamanka Federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ka dhisan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Bayaanka oo ku qornaa Af-Soomaali iyo English ayaa lagu sheegay in ergooyinkaasi ay ku dhaceen fal-gaalnimo ah waxaana Al-shabaab u qabatay mudda 45 cisha ah in ay ka toobad keenaan islamarkaana iska diiwan-geliyaan xarumaha Al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Al-shabaab waxay ergooyinka soo xulay xildhibaannada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ku eedaysay in ay gun-dhig u noqdeen in dalka laga hirgeliyo maamulo ku dhisan Dastuur aan waafaqsaneyn Shareecada Islaamka oo horseedaya in gumeysi la geliyo Soomaaliya.
Waxa kaloo Al-shabaab ku hanjabtay in ay tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo ka tirsan ergooyinkaasi oo aan ka faa’idaysan mudada 45 maalmood ah ee loo qabtay in ay iska soo diiwan-geliyaan xarumaha Al-shabaab.
DAAWO:- Dhulgariir baaxadleh oo ku dhuftay Deegaano katirsan Puntland + Cabsi badan oo jirta.
DAAWO:- Madaxwayne Deni oo si dadban ukarbaashay DFS “Waxay rabaan in ay nagu diraan Dhalinyaradeena”.
Maanta waa maalin madow oo taariikhda geli doonta. Waa 17kii Oktoober 2021. Dhalinyarada Dhulbahante ee Puntland Cabsi Ka Buuxisey